Chii Chitsva: Debian 8.0, Debian 9.0, uye Debian 10.0 | Linux Vakapindwa muropa
New codenames akaziviswa eDebian 9 uye Debian gumi mapurojekiti
Pashure Debian 7.0 (inofadza) yatove kushandiswa, ikozvino isu tinofanirwa kumirira mwedzi mishoma kuburitswa kweDebian 8.0, iri parizvino iri kuvandudzwa. Isu tatozviziva izvozvo Debian 8 "Jessie" Ichauya neLinux kernel 3.16 uye neyakaoma kwazvo kuvandudza shure kwayo, sevanhu venharaunda yevagadziri veiyi projekiti vajaira.
Panguva ino isu tinofanirwa kugutsikana neakawanda maDebian 7.0 mhedzisiro anga achionekwa (7.1, 7.6,…). Asi Debian Chirongwa inozivisa emangwana macodenames eiyo Debian 9 uye Debian 10 shanduro, dzatinofanira kumirira kwenguva yakati rebei.
Zvakanaka, zvakagadziriswa kuti ma "kodhi mazita" eaya emangwana vhezheni eDebian ari "Tambanudza" uye "Buster", yeDebian 9.0 uye Debian 10.0 zvichiteerana. Uye nekuda kwevashandisi veDebian uye akatorwa distros, senge Ubuntu, isu tese tinotarisira kuti zvisinei nemazita, iwo akanaka masisitimu senguva dzose ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » New codenames akaziviswa eDebian 9 uye Debian gumi mapurojekiti